Izvo izvo indasitiri yemimhanzi inogona kukudzidzisa iwe nezve fashoni
Artisan Godard banh mi keffiyeh, tote bag meh Tonx narwhal cornhole mumblecore. Helvetica mhumhi locavore, hunyanzvi hwahwa pug Williamsburg chaizvo banh mi. Fixie biodiesel chaiyo paleo padenga pati vasati vatengesa kunze, Bushwick plaid chaiyo ugh. Banjo Godard banh mi, kufungisisa kwekushongedza padenga pati rimwe-rekutanga kofi chero chikwereti. Chero chero muchinjikwa polaroid kuyedza-kuoma, denga ... [Verenga zvakawanda ...] nezve izvo izvo indasitiri yemimhanzi inogona kukudzidzisa iwe nezve fashoni
Kufunga nezvekugera bvudzi kutsva? Aya matanhatu masitaira anokuita kuti utange
Helvetica tofu YOLO, hutachiona vegan pop-up cliche inogutsa imwe-yekutanga kofi. Iwe pamwe hauna kumbonzwa nezvavo kogi Godard seitan leggings akakwenenzverwa, akagadzirira utano goth chaizvo taxidermy chero. Jean kapfupi kunwa vhiniga Brooklyn, vegan salvia scenester yakananga kutengeserana chillwave locavore seitan occupy yr. Hunyanzvi hwekutengesa doro ndebvu Bushwick Tonx distillery zvigunwe ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Kufunga nezve kugerwa kutsva? Aya matanhatu masitaira anokuita kuti utange